म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका आजदेखि एक हप्ताका लागि बन्द | Samacharpati म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका आजदेखि एक हप्ताका लागि बन्द – Samacharpati
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका आजदेखि एक हप्ताका लागि बन्द
म्याग्दी, ३ मङसिर । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय आजदेखि एक हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अध्यक्ष डमबहादुर पुनले एक सूचना जारी गरेर मङ्सिर ३ देखि ९ गतेसम्म सेवा बन्द गरिएको जानकारी गराउनुभएको हाे ।
कात्तिक २८ गते गाउँपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । सङ्क्रमित कर्मचारीको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पहिचान र परीक्षणका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह बन्द गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले बताउनुभएको छ ।
कात्तिक २५ गते १५ जनाको स्वाब नमूना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएकामा एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक समुन्द्र बरुवालले बताउनुभयो । होम आइसोलेसनमा रहेका कर्मचारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सेवा बन्द गरेर कन्ट्याक्ट टेसिङ गर्न लागिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पहिलोपटक समुदायका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यसअघि गाउँपालिकाले कात्तिक २४ देखि २८ गतेसम्म पालिकामा रहेका बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाको सेवा बन्द गराएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल कहिलेबाट ?
शिवालय बाल क्लबमा निश्चल
तराईमा शीतलहरको कारण जनजीवन कष्टकर
फेवातालको सीमांकन कार्य सकियो, नक्सांकनमा जुट्यो समिति
जन्डिस भनेको के हो ? जन्डिस कसरी शुरु हुन्छ ?